Ama-Archives we-SCIENCE - Thumela RELAY
Abaphenyi abacwaninga ukwakheka kwezinyembezi ezivela ezinhlotsheni ezahlukahlukene bathole ukuthi abantu, izidalwa ezihuquzelayo nezinyoni zinazo izinyembezi. Ucwaningo lungaholela ekwelashweni okusha kokusetshenziswa kwezilwane. Amanqanaba athile ...
I-TASA ye-NASA, iTransiting Exoplanet Survey Satellite, isiqedile ukuthunywa kwayo okuyisisekelo futhi manje izodlulela kwi-mission eyandisiwe lapho izoqhubeka nokuzingela imihlaba emisha. I-TESS isivele ibone okungenani okusha okungu-66…
Abaphenyi kuleli sonto bakhiphe isibuyekezo se-coronavirus esiboshwe kwimibhikisho emadolobheni amakhulu azungeze i-US kuleli hlobo. Cishe abantu abangama-40,000 bahlolisisiwe ukuthola ukuthi kunokuxhumana okungalungile phakathi kwabantu aba…
Le ngwenya yayiyisisulu esikhulu kunazo zonke zesikhathi sayo
Izingwenya zesimanje zivame ukubhekwa njengezinsalela eziphilayo, njengoba uhlu lwazo ludala izigidi nezigidi zeminyaka. Esikubona namuhla akuhlukile kwezinye zezinhlobo ...
I-Xiaomi ithulula i-HDTV yayo entsha nge-screen esobala.
Ngenkathi ubuchwepheshe be-smartphone sebuthuthukile ekuxhuma nasemikhawulweni eminyakeni yamuva nje, okufanayo akunakushiwo kumabonakude. Vele, ama-HDTV abe mncane kakhulu futhi angabizi kakhulu lokhu…
laba badlali bezingcingo babuyisela umsebenzi we-digital ezwekazini
Bayingxenye yesikhundla sethu sobuntu obu-100 obumqoka base-Afrika abangama-2020: bangabadlali bezingcingo, ababuyisele umsebenzi wabo ngokwenza igagasi lokuthuthuka kwedijithali ...
Umuthi wokugomela i-coronavirus ungaba nethuba elikhulu ngaphezu kwezimbangi zawo - BGR
Ukuvuselelwa kokugoma okusha kwe-coronavirus kukhathaza uJohnson & Johnson, umuthi wakhe wokuhlola osanda kungena esigabeni 1 sokuvivinywa komuntu. Umuntu ozogomela ukuletha izimpendulo ezifweni zezinkawu ngokudutshulwa okukodwa nje…
Tchinde Agasti 10, 2020 0
Ngeke nakancane basitshele kodwa amadoda awazithandi zonke iziqu zethu embhedeni… 1. Uma ukhala kakhulu kakhulu Khombisa injabulo yakho, yebo. Umuntu wethu angagcotshwa nje ukuthi azi ukuthi siyenyuka ...
Indlela ejwayelekile yokuthola i-coronavirus ayisebenzi ngalutho eqenjini elikhulu labantu -…
TELES RELAY Agasti 10, 2020 0
Abaphenyi ababheka cishe amadoda ayi-100 athi ahlolwe ukuthi ane-COVID-19 aveza ukuthi izinga lokushisa lomzimba alibonakali njengendlela ethembekile yokuthola ukutheleleka nge-coronavirus. Kwabesilisa abangama-84 abaphakathi kweminyaka engu-18 no-25, bambalwa kuphela ababene…
Thola umphefumulo wakho womshado ngokusekelwe kusibonakaliso sakho sezinkanyezi!
Thola ukuthi isiphi isibonakaliso sokufunda izinkanyezi umphefumulo wakho oshade naye ngokusekelwe kwesakho! Muva nje, siphakamise ukuthi uthola ukuthi yisiphi iswinguit yokubhukuda okufanele usigqoke ngokwesibonakaliso sakho senkanyezi futhi siyabuya namhlanje nesihloko esihlangana kulokhu ...